शनिबारको सदुपयोग गर्नेहरु जान्छन् ‘स्मार्ट क्लब’ – HamroKatha
शनिबारको सदुपयोग गर्नेहरु जान्छन् ‘स्मार्ट क्लब’
हामी यस्तो पनि सोच्न सकिन्छ कि युवा आउने र जाने ठाउँ हो I आउने जाने भई रहन्छ I आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने हो र अघि बढ्ने हो I युवा पानी जस्तै बगिरहने हो, समार्ट क्लब को पानी बग्न दिने स्तल हो I त्यो स्तल सधैव उस्तै रहिरहन्छ I अरुलाई अघि बढाई रहन्छ I
हाम्रो कथा २०७५ फागुन १५ गते १५:३३
काठमाडौंमा साप्ताहिक रुपमा संचालन भईरहेको ‘स्मार्ट क्लब’, एक वक्तित्व कला विकास गर्ने मात्र नभई व्यक्तित्व विकास गर्ने मंच हो I स्तरीय वक्तित्व कला विकास गर्ने मंच, जहाँ समय, विषयवस्तु, भाषा, स्वर, गति र समयको आवश्यकतालाई राम्रो संग सम्बोधन गरी आफुलाई एक कुशल वक्ता बनाउन सकिन्छ I यसरी नै हाम्रो देशको परिवेशमा ‘स्मार्ट क्लब’मा संग्लग्न रहि सयौं कुशल कलाकार, सामाजिक रुपमा सक्रिय जमात, युवा उद्यमी, नेतृत्वहरुको जन्म भएको छ I ‘स्मार्ट क्लब’ले युवालाई सोच्न र स्पष्ट बोल्न मात्र नभई जीवन जिउन पनि सिकाएको छ I यसरी कयौं आत्म-विश्वासी युवाहरु आज हामी माझ प्रगति उन्मुख काम गरिरहेका छन् I
‘स्मार्ट क्लब’ को संचालन प्रक्रिया र एक दशक भन्दा पनि लामो यात्रा कसरी सम्भव भयो भनेर बुझ्नको लागी ‘स्मार्ट क्लब’ का सक्रिय सदस्य प्रज्वल बिक्रम बिस्टसंग कुराकानीको केहि अंश I
हाम्रो कथा : ‘स्मार्ट क्लब’ को यो सोच कसरी आयो ? कसरी सुरु भयो ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : ‘स्मार्ट क्लब’ ‘युथ इनिसियटिब’ संस्थाको एउटा कार्यक्रम हो । ‘युथ इनिसियटिब’ को विङ्ग प्रोग्रामका रूपमा ‘स्मार्ट क्लब’ सञ्चालित छ । करिव चौध वर्ष अधि देखि यो क्लब क्रियाशील छ । केही हप्ता अघि हामीले ६ सय सेसन सम्पन्न गर्यौं । ६ सयौं सेसनमा हामीले ‘अलुम्नाई मिटअप’ भनेर राख्यौं । सो-सेसन चाहिँ हाम्रा पुराना छुट्नु भएको सदस्यहरू या भनौँ आफ्नो व्यवसायीक जीवनमा प्रवेश गर्नु भएको, पेशागत जीवनमा निकै नै व्यस्त भई सक्नु भएका सदस्यहरुलाई निम्तो गर्यौं । तब मात्र हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो ‘स्मार्ट क्लब’ यति लामो समयबाट सञ्चालित छ । ‘स्मार्ट क्लब’ भनेर चाहि करिब १४ वर्ष पहिले रविन सिटौला दादा जो हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले गर्नु भएको हो ।
‘स्मार्ट क्लब’ भन्ने बित्तिकै कति युवामा यो त मान्छेलाई एकदम स्मार्ट बनाईन्छ भन्ने अवधारणा रहेको पाईएको छ, जुन गलत हो । चौध वर्ष पहिले, स्मार्टको परिभाषा र अहिलेको परिभाषा मा फरक छ र अहिले एक व्यक्ति लै स्मार्ट बनाउन त्यति सहज पनि छैन । त्यो समय रविन सिटौला, देव कुमार सुनुवार, हरु हुदै रफायल पौडेल, मनिष जोशी लगायत अन्य गरी ८/१० जनाको समूहबाट सुरु भएको यो क्लब ६/६ महिनामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै आजसम्मको अवस्थामा आईपुग्यौं ।
हाम्रो कथा : ‘स्मार्ट क्लब’ कसरी सञ्चालित छ ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : पहिले पनि भनेको जस्तै ‘स्मार्ट क्लब’ एक सामाजिक संस्थाको कार्यक्रम हो । तर युवा द्वारा स्वचालित रूपमा हरेक हप्ता एउटा निश्चित स्थानमा सञ्चालित हुने कार्यक्रम भएकोले मुख्य संस्था या भनौँ केन्द्रले भन्दा पनि युवा हरुले नै चलाए को हो कि जस्तो पनि महसुस हुन्छ । ‘स्मार्ट क्लब’ हामी जस्ता एघार, बाह्र र स्नातक तहसम्मका पढ्दै गरेका, काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका युवाहरुले चलाएको एक व्यक्तित्व विकासको लागि राम्रो मंच हो भन्दा फरक नपर्ला । हामी यहाँ आउँछौ र यहाँको वातावरणमा भिज्छौ I क्लबका साथीहरूले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ, चलाउनु पर्छ भनेर चलाइरहेका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिई रहेका छौँ ।
हाम्रो कथा : ‘स्मार्ट क्लब’ को मुख्य उद्देश्य के हो ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : चौध वर्ष अघिको सोचले विकास भएको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूलाई स्मार्ट बनाउनु नै थियो भन्ने लाग्छ । यो चाहिँ विश्वव्यापी प्रचलित ‘टोस्ट मास्टर’को ढाचा मा अलि अलि मिलाएर स्थापित गरिएको हो। चौध वर्ष पहिले चाई मानिसहरु को अगाडी नडराई बोल्ने कला विकास को लागि स्थापित भए पनि अहिले यसको मुख्य उद्देश्य पब्लिक स्पीकिंग मात्र नभई नेटवर्किंग, वादविवाद सम्बन्धित कला, र देश विदेशमा रहेका विभिन्न विषयमा बहस, छलफल गरी युवा जमातलाई सचेत र तार्किक बनाउने राखेको छ । अझ भन्न पर्दा एउटा व्यक्तिले शनिबारको फुर्सदिलो ३ घण्टा समय घरमा बसेर बर्बाद गर्नु भन्दा पनि त्यो समय सदुपयोग गरोस् भन्ने हो । हाम्रो साथी सर्कल र नेटवर्किंग निकै फैलिएको छ । त्यही नेटवर्किंगको सदुपयोग आउँदा सम्पूर्णले लिउन भन्ने नै हो ।
हाम्रो कथा : कुनै अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिक स्पिकिंगसँग ‘स्मार्ट क्लब’ आवद्द छ ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : हामीले पहिले पनि भने जस्तै ‘टोस्ट मास्टर’ को सोचलाई अगाडी ल्यायौं होला तर हामी अहिले सम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय क्लब वा संस्था सँगै चाहिँ आबद्ध भने छैनौ । स्मार्ट क्लब आफैमा एउटा जीवन हो, यसको आफ्नो छुटै परिचय छ र कुनै अन्तरास्ट्रिय संस्थासंग आवद्द नभएपनि हामीले समाजमा निकै प्रभाव परेका छौ र त्यहि नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो । यद्यपि पहिलो जुन स्तरमा थियौं, हामी चौध वर्षपछि हेर्दै गर्दा शैलीमा उस्तै भए पनि हामी धेरै माथि उठेका छौ, हामीले धेरै युवा साथीहरुसंग जोड्न सकेका छौँ ।
हाम्रो कथा : यति लामो समय सम्म तपाईँ र तपाईँ भन्दा अग्रज नेतृत्वले यो क्लबलाई कसरी डोर्‍याई रहनु भएको छ ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : हामी सबैका निम्ति पब्लिक स्पिकिंगको परिचयका रूपमा विकास भएको ‘स्मार्ट क्लब’ हाम्रा निम्ति चाहिं एउटा परिवार र आफ्नै घर जस्तै बनेको छ । इमान्दारिता, साथ-सहयोग भए पछी माया र भरोसा पलाउँछ। यसै कारण, कतिपय साथीहरु आफै यसलाई अगाडी लैजानु पर्छ भनेर आफै स्वत: स्फूर्त रूपमा अगाडी आउनुहुन्छ । हामीसंग भएको ऊर्जा यहि नै हो, जसले ‘स्मार्ट क्लब’ यहाँसम्म, आजको दिनसम्म आईपुगेको छ I हामी प्रत्येक ६/६ महिना मा अर्को ब्याच नयाँ नेतृत्व आउँछ र क्लबलाई अगाडी लान्छ ।
हाम्रो कथा : मुख्य रूपमा युवाहरूलाई ‘स्मार्ट क्लब’ले कसरी आकर्षित गरिरहेको छ ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने, हामीले युवालाई आकर्षित त गरौला, तर स्मार्ट क्लब त्यो भन्दा माथि छ I हामी कसैलाई आकर्षित गरेर लाउनु भन्दा पनि जीवन मा स्मार्ट क्लबको महत्व धेरै छ है भन्ने कुरा बुझेर चाहिँ ल्याउने गर्छौ I स्मार्ट क्लब हामी सबैका लागि एक सेवा गर्ने थलो हो I यसले गर्दा हामी युवा मित्रहरुलाई आईरहन प्रोत्साहित गर्दछौं I
चौध वर्ष देखि हामीले एकै किसिमले पहिलो सेसन चलिरहेका छौ, त्यही पनि इच्छुक युवा साथीहरु आईरहनु भएको छ । त्यहि भएर, मेरो बिचारमा कोहि व्यक्तिलाई सिक्ने इच्छा छ भने उहाहरु आफै खोजेर आउनु हुन्छ , थाहा नहुने मित्र हरुलाई हामी सके सम्म पुग्ने कोसिस गरि रहन्छौं I कसैले व्यक्तिगत तहमा आफ्नो विकास गर्ने कुनै ‘प्लेटफर्म’ खोजिरहनु भएको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ हामी स्विकार्छौ ।
हाम्रो कथा : अन्त्यमा; युवाहरूका निम्ति केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
प्रज्वल बिक्रम बिस्ट : म सम्पूर्ण युवा मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु , जीवनमा एकपल्ट भए पनि ‘स्मार्ट क्लब’ के हो भनेर अनुभव गर्नक लागि भए पनि स्मार्ट क्लब आउनुहोस् । स्मार्ट क्लबले धेरैलाई अगाडी बढ्ने मौका दिएको छ, तपाइलाई पनि अवश्य दिनेछ I स्मार्ट क्लब तपाईहरुकै लागि बनिएको हो भन्ने बुझेर अर्को हप्ता शनिबार स्मार्ट क्लब आउनुहोस I अनि जो-जो यो क्लब सँग जोडिएर टाढा हुनु भयो, सबै अग्रजलाई पनि एक पल्ट फेरि फर्केर आउनुहोस भन्न चाहन्छु । हामी सबै मिलेर स्मार्ट क्लबलाई कुन स्तरमा लैजाने हो भनेर सोचौँ । जसरी सकिन्छ आउने नयाँ पुस्तालाई स्थान दिऔं र हामी सबैसँगै मिलेर अगाडी बढौँ भन्न चाहन्छु । र, मेरा साथीहरु (अर्जुन, आरोही, सुकृति, संबज ) जसले यो कार्यकाललाई सफल बनाउन मेहेनत गर्नु भएको छ – मेहेनत जारी रहोस् I